I-Raw DMAA powder (13803-74-2) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder i .......
Umthamo: 12400kg / inyanga
SKU: 13803-74-2 Isigaba: Weight Loss
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (i-13803-74-2) ividiyo
Imininingwane ye-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) Imininingwane
Igama Product I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder
Igama leKhemikhali 4-methylhexan-2-Amine, DMAA, Dimethylamylamine, 1, 3-DMAA, Geranamine, Methylhexaneamine, 3-Dimethylpentylamine, Forthane
Brand NAme I-Forthane, iGeranamine
I-Drug Class Ukwengeza kokudla
CAS Inombolo 13803-74-2
I-molecular Fi-ormula C7H18ClN
I-molecular Weziyisishiyagalombili 151.67752
IMisa ye-Monoisotopic I-115.136 g / mol
Ukuxuba Pi-oint I-120-130 ° C
I-Half Half-Life DMAA has nengxenye-ukuphila 8.4 amahora kuqhathaniswa 5.4 nje amahora caffeine, kanye nesikhathi lag ka 0.14 amahora vs 0.37 amahora caffeine.
Sukufaneleka Emanzini, i-1.5X10 + 4 mg / L ku-25 deg C (est)
Sukuhlushwa Tukushisa Isiqandisisi
Aukuphikisana Njengengxenye yokwengeza yokuvuselela noma yokuvuselela amandla
Raw I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2) Incazelo
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder yi-derivative yama-amphetamine edayiswe ekusebenzeni kwezemidlalo nemikhiqizo yokulahlekelwa kwesisindo, eziningi zazo ezithengiswa njengezithako zokudla. Njengoba uhlelo lwe-nervous central central (CNS) olunamandla kakhulu, i-DMAA ithuthukisa amazinga wamandla afana neka-caffeine, kodwa isebenza ngendlela ehlukile. Nakuba izindlela eziqondile lapho i-DMAA ikhulisa khona amandla akuyona i-100% ethile, iningi labacwaningi bayavuma ukuthi i-DMAA ivuselela i-noradrenaline (norepinephrine) ukukhululwa ebuchosheni.
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (i-DMAA) nayo yaziwa nangokuthi i-methylhexanamine noma i-geranium extract, noma kunjalo, i-FDA ayiyazi noma isiphi isayensi ethembekile ebonisa ukuthi i-DMAA ikhona ngokwemvelo ezitshalweni. Nakuba i-DMAA ngesikhathi esisodwa ivunyiwe njengesidakamizwa sokuncibilika komzimba, ayisasavunyelwe ngalokhu ukusetshenziswa futhi akukho ukusetshenziswa kwezokwelapha kwe-DMAA powder okuqashelwa namhlanje. I-DMAA, ikakhulukazi ngokuhambisana nezinye izithako ezikhuthazayo ezifana ne-caffeine, ingaba yingozi engozini kubathengi. Ukuthatha i-DMAA powder kungakhipha ukucindezeleka kwegazi futhi kuholele ezinkingeni zenhliziyo ezivela ekuphefumuleni nasekuqiniseni esifubeni senhliziyo.
Ucwaningo lwezilwane ze-DMAA powder kuma-1940 no-1950s lubonise imiphumela ye-sympathomimetic yezinto eziphilayo ezilingisa isenzo se-epinephrin nge-peripheral syndathetic neuron kanye nemiphumela emibi yesistimu yezinzwa. Lokhu kuhlanganisa ukukhuphuka komfutho wegazi ngenxa yokuvinjelwa kwemithwalo yegazi yangaphandle, izinga lokushaya kwenhliziyo okwenyuka ngenxa yokugqugquzela inhliziyo nokunyuka kwamazinga kashukela egazini.
I-Vasoconstriction - imithwalo yegazi emmpumeni yayiyokwenza ukuthi ukugeleza kwegazi okuncane kungabangela ukukhishwa kwengcosana encane. Lokhu kuyindlela esetshenziselwa ukuphambuka kwe-OTC yama-nasal ejwayelekile njenge-oxymetazoline (i-Afrin) futhi ngempela isebenza kahle. Kodwa-ke, u-Forthane wakhishwa kamuva emakethe ngenxa yemiphumela emibi ehlanganisa ukuphathwa ikhanda, ukuzamazama nokunyuka kwengcindezi yegazi. Lezi zimo kungenzeka ukuthi zenzeke ngoba i-DMAA ihlelekile ngokufana ne-amphetamine futhi ngenxa yalokho, i-compound ayiyona nje i-agent ye-vasoconstricting kodwa futhi iyisistimu ye-nervous central (CNS) evuselelayo.
Izinzuzo ye-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
I-DMAA isiza ukuthuthukisa imemori yesikhathi esifushane nesenzo esicacile
I-DMAA isiza ukushisa amafutha
I-DMAA ingathuthukisa ukusebenza komzimba
I-DMAA ithuthukisa izinzwa nokunyuka kokugxila
I-DMAA ithuthukisa isimo sengqondo nomzwelo jikelele wenjabulo
I-DMAA ithuthukisa ikhono lokuqonda
I-DMAA ikhulisa amandla, ukugxila okungeziwe nokugqugquzela
Kunconywe I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
I-dose ephakanyisiwe ye-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (i-DMAA) ibubanzi be-10-20mg futhi ekugcineni ifinyelela ku-40-60mg ngosuku, abukho ubufakazi obuqondile bokusekela lobubanzi bokulinganisa kodwa kubonakala sengathi bubhedu obulinganiselwe besilinganiso for supplemental1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) emakethe. Kunezindlela ezithile zokusebenzisa:
25mg plus 25mg 30min ngemuva kwesilinganiso sokuqala
I-50mg isisu esingenalutho
I-50mg DMAA i-powder eluhlaza kanye ne-Cup of Coffee engenalisu.
Uma usebenzisa izindlela zokuqala nezibili, ungase ungaboni ushintsho ngoba ukugxila kuncane.
Uma usebenzisa izindlela zesithathu nezesine, i-DMAA powder izokunika ukugxila okukhulu nokugxila nokuthuthukisa isimo sakho sengqondo. Imizwa yakho iyoba kuhle. Yiqiniso, indlela yesine ingase ibe ngcono ngoba izosebenza kangcono.
Enye indlela ukuthatha i-25mg ye-DMAA powder amahora amabili ngemuva kokuthatha i-50mg. Lokho kuyoba indlela embi, kuyokwenza uzizwe unesizungu futhi uthola ikhanda elincane. Abanye abasebenzisi abanolwazi babonisa ukuthi umthamo we-DMAA akufanele udlule i-75mg esikhathini se-24, futhi kungcono ukungathathi i-75mg ngosuku olulodwa.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo ye-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder (13803-74-2)
I-1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) powder cishe ingaphephile lapho ithathwa ngomlomo. Njengoba kucatshangwa ukuthi kusebenza njengento evuselelayo, kunokukhathazeka ukuthi kungandisa ukwanda kwemiphumela emibi efana nalokhu:
Isilinganiso senhliziyo nomfutho wegazi
Hlanganisa nezidakamizwa kabi.
Ukushaya kwenhliziyo okungavamile (inhliziyo ye-arrhythmia)
I-Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder (5984-59-8)
I-Raw (i-1,5-dimethylhexyl) i-ammonium powder chloride iyinkimbinkimbi ye-anesthetic yendawo futhi ......... ..
Umthamo: 1400kg / inyanga
I-Navy Nicton (Monomucleotide) i-Nicotinamide Mononucleotide (1094-61-7)
I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ewutshani obuningi obunqunywe ukukhula komzimba ......
Umthamo: 1370kg / inyanga
I-Lorcaserin powder eyinhlanhla ingokwalabo ekilasini lemithi ebizwa ngokuthi i-serotonin receptor agonists.Isebenza ngokukhulisa imizwa yokugcwala ukuze ......
Umthamo: 1480kg / inyanga